७ जना निरीक्षक र १७ परीक्षार्थी पक्राउ - City Post Daily
March 28, 2019 विविध / समाज / सिटी खबर
काठमाडौँ, १४ चैत । सप्तरी र सिरहामा एसइई परीक्षामा अमर्यादित क्रियाकलापमा संलग्न रहेको अराोपमा बुधबार ७ निरीक्षक र १७ परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन् । गणित विषयको परीक्षामा महावीर मावि हनुमाननगरबाट परीक्षा दिइरहेका भुपेन्द्रकुमार साह, मधुकुमारी मण्डल र बैजु राम पक्राउ परेको विद्यालयले जनाएको छ । चिट चोर्न मोबाइल प्रयोग गरेको पाइएकाले उनीहरुको आजको परीक्षा रद्द गरिएको केन्द्राध्यक्ष डम्बरनारायण यादवले बताए । यसैगरी बमनगामा कट्टी परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिइरहेका तिलाठी कोइलाडी लौनियाका बुधेश्वर यादवलाई समेत मोबाइल प्रयोग गरेको पाइएपछि पक्राउ गरिएको छ ।
जनता मावि बसबिट्टीबाट परीक्षा दिइरहेका ह्याप्पीलैण्ड सेकेण्ड्री माविका अनिल साह र विमल दासलाई समेत आजको परीक्षा सकिने वित्तिकै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । पहिलो दिन फेला परेको मोबाइल उनीहरुको रहेको पत्ता लागेपछि अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । मोबाइल प्रयोग गरी भाइबर, वाट्सअप र फेसबुकको चाट म्यासेञ्जरबाट प्रश्नपत्रको तस्बिर बाहिर पठाउने र सोही माध्यमबाट उत्तर आएपछि उत्तर पुस्तिकामा उतार गर्ने गरिएको पाइएको छ । कमलेश्वरी किशुन झौलाई मावि वनरझुला केन्द्रमा मोबाइललगायत फ्लाप कपीबाट चिट चोराएको भेटिएपछि पाँचजना निरीक्षक पनि आजै पक्राउ परेका छन् । उक्त विद्यालयमा चिटका लागि प्रयोग भएको बेवारिसे मोबाइल समेत फेला परेको छ । चिट चोराउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा खडक नगरपालिका– ४ का देवनारायण मण्डल, खडक ९ का मनोजकुमार चौधरी र खडक– १० का रामसुन्दर चौधरी, सुरुङ्गा नगरपालिका–४ का लगेन्द्रप्रसाद चौधरी र सुरुङ्गा–८ का रामानन्द चौधरी पक्राउ परेको इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोनाले जनाएको छ । परीक्षा अमर्यादित भएको विषयमा केन्द्राध्यक्ष रामअवतार गुप्तालाई समेत राजविराज झिकाइ सोधपुछ गरिएको छ ।
यसैगरी सिरहामा बुधबार भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा अमर्यादित गतिविधि गरेको भन्दै २ जना निरीक्षक निस्कासनमा परेका छन् भने ११ जना विद्यार्थीको परीक्षा रद भएको छ । परीक्षामा विद्यार्थीाई चिट चोर्न सहयोग गरेको भन्दै चन्द्र मा.वि. परीक्षा केन्द्र सिरहा, र सारस्वर मा.वि. परीक्षा केन्द्रबाट एक एक जना शिक्षक निस्कासनमा परेका हुन् ।
परीक्षा हलभित्रै मोबाइल लगेर प्रश्नपत्र आउट गर्ने तथा अमर्यादित गतिविधि गरेको आरोपमा लहानको बस्तिपुर मा.वि. परीक्षा केन्द्रका ८ जना, सिरहाको सारस्वर मा.वि. परीक्षा केन्द्रका २ जना र चन्द्र मा.वि. परीक्षा केन्द्रबाट १ विद्यार्थीको परीक्षा रद गरिएको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख दोलराज पाण्डेले जनाकारी दिए । निस्कासनमा परेका सबै विद्यार्थीको बुधबारको परीक्षा रद गरिएको पनि इकाई प्रमुख पाण्डेयले जनाए । निस्कासनमा पर्ने प्रयाः विद्यार्थी निजी विद्यालयको रहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी, सिरहाको जनता माध्यमिक विद्यालय, धनगढीमाई नपा ७ अयोध्यानगर कसहामा सेटिङ्गमै चिट चोरी हुने गरेको छ । परीक्षा केन्द्रसँगै गाँसिएका घरहरुमा बसेर विशेषगरी निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले सुरक्षाकर्मीकै अघिल्तिरबाट चिट पुर्याउने गरेको पाइएको छ ।
अयोध्यानगर परीक्षा केन्द्रभित्रै छ्यापछ्यापती चिट भेटिए पनि केन्द्राध्यक्ष मूकदर्शक बनेको अनुगमनमा पुगेका एक सञ्चारकर्मीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘परीक्षार्थीको साथबाट चिट निकालिए पनि किन कारबाही नगरेको भन्दासमेत उनिहरु हामीले मर्यादित गरेका छौं भन्दै पन्छिए ।’बाहिरबाट चिट आइरहेको विषयमा बुझ्दा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष राजलाल रायले आफूहरुले केन्द्रभित्र परीक्षा कडा गरेको बताए ।
नेकपाको चैत्र १६ को नेपालबन्द फिर्ता